Okpomọkụ stabilizer maka ịkwanyere na UPVC oyiyi akwa drainage p ...
Calcium Zinc otu mkpọ stabilizers maka okomoko vinyl t ...
Eco-enyi na enyi stabilizer maka flooring Vinyl ịkwanyere ceili ...
Eco-friendly na-abụghị egbu egbu Stabilizers maka calcium zinc ...
Non-egbu egbu stabilizer maka onu mkpụbelata adụ na mgbanwe ...
UL90 ℃ PVC stabilizer maka gwara mmanụ waya otu isi waya eletriki waya ọla kọpa na-eduzi network cable
Aimsea anọwo na-emepe emepe, n'ichepụta na ịzụ ahịa siri ike, Calcium Zinc (CaZn) dị elu nke na-emezi ihe iji mezuo ihe ndị chọrọ nke njedebe akwa na ngwa mkpuchi maka ụlọ ọrụ eriri. CaZn bụ ọtụtụ ndị na-emefu ego na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke na-akwalite arụmọrụ nke ogige PVC agwula, na-enye ezigbo nkwụsi ike na ọkụ eletrik, agba agba mbụ na agba agba, dabara adaba maka obere na arọ calcium ojii, waya ọcha na eriri, magburu onwe ya nkwụsi ike thermal, kwesịrị ekwesị maka jaket ike USB.
UL80 ℃ PVC Stabilizers mgbanwe PVC waya ahaziri cabling coaxial fiver kpara akpa waya
A na-ejikarị ndị na-edozi PVC anyị eme ihe maka eriri Twisted Tw cable maka nkwukọrịta ekwentị na ọtụtụ netwọk Ethernet ugbu a. Ọ bụ ụdị nke waya na nke na-agbagọ abụọ na-eduzi otu circuit. Otu ụzọ wires na-emepụta sekit nke nwere ike ịnyefe data. Na abụọ na-gbagọrọ agbakọ ọnụ na-enye nchebe megide crosstalk, mkpọtụ site n'akụkụ ụzọ abụọ. Emere coaxial cable, ma ọ bụ eriri coax, iji kesaa akara ngosi dị elu. Ihe dị na ya bụ Congo na-acha uhie uhie maka waya ojii na eriri, dabara adaba maka usoro calcium, na-adabara jaketị ntụ ntụ na ezigbo nkwụsi ike ọkụ.
UL105 ℃ PVC stabilizer maka waya ala echichi telekomunikashions eriri
Usoro nkwụsi ike nwere mmetụta dị ukwuu na arụmọrụ na ndụ ọrụ nke eriri PVC. Ọ na-eme ka nrụpụta dị mma nke eriri na wires, eriri ala, eriri ntinye, eriri telekomunikọnụ ma na-enye ihe ụfọdụ akọwapụtara na ngwaahịa ndị gwụchara-gụnyere ezigbo nkwụsi ike na ọkụ eletriki, agba mbụ na agba agba, dabara adaba maka obere na arọ calcium ojii, waya ọcha na USB, magburu onwe ya kwes kwụsie ike, adabara ike USB jaket.
Calcium Zinc onye na-emechi ihe maka eriri 5G eriri igwe eletrik
A na-ejikarị PVC eme ihe maka eriri 5G eletriki eletriki eletrik n'ihi ezigbo ihe ndị na-ekpuchi ọkụ eletrik ya na ikuku eletrik. A na-ejikarị PVC eme ihe na eriri USB dị ala (ruo 10 KV), usoro nkwukọrịta, na wiwi eletriki. Usoro nkwụsi ike nwere mmetụta dị ukwuu na arụmọrụ na ndụ ọrụ nke eriri PVC. Ọ nwere ike ịmepụta eriri na wires n'ụzọ dị irè, ma nye ngwaahịa ahụ agwụcha-gụnyere ezigbo nkwụsi ike na ọkụ eletrik, ụcha agba mbụ na agba agba, ezi usoro ihe eji arụ ọrụ, mgbasa ozi mgbasa. Ca / Zn stabilizer na-agbakwunye mgbe niile na waya & mkpuchi mkpuchi na ogige jaket iji nwekwuo mgbanwe ma belata brittleness. Ọ dị mkpa na stabilizer ejiri mee ihe nwere nnukwu ndakọrịta na PVC, obere volatility, ezigbo njirimara ịka nká, ma bụrụ nke na-enweghị electrolyte. E wezụga ihe ndị a chọrọ, a na-ahọrọ plastik na ihe ndị chọrọ ngwaahịa a gwụchara.
Stabilkwanyere stabilizer akụrụngwa maka ịgba ubi sooks adụ anwụrụ ịkwanyere plastic ọkpọkọ
Ihe plasticizer ahụ etinyere na matriki PVC na-eme ka mgbanwe ya dịkwuo elu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa ọ bụla achọrọ ma na-agbatịkwu nke ngwa nke PVC plastik. Tumadi eji maka akpa (nri, ọgwụ na ahụ ike), Hoses (nsogbu, ogige, mgbapụta), gaskets, siwing ibo ụzọ na handrails. Ndị na-edozi ahụ nwere nkwụsi ike dị elu, isi ísì, mma ikuku dị n'ime ụlọ, nkwekọ dị mma na plasticizers.
Mgbapụta na-egbu egbu n'efu maka ịkwanyere akwụkwọ PVC doro anya na-ebi akwụkwọ mpịakọta PVC dị nro
E wezụga ihe nkiri PVC siri ike, enwerekwa ọtụtụ eziokwu maka ngwa CaZn Stabilizer dabere na ihe nkiri PVC na-agbanwe agbanwe. Ihe nkiri plastik na-achịkwa ahịa ahụ, ọ bụ ezie na ihe nkiri na-agbanwe agbanwe na-enweghị plasticizer na-abanye n'ahịa ahụ. Ihe nkiri a na-agbanwe agbanwe bụ nke a na-ejikarị eme ihe nkiri fim, windo na-ekpuchi ihe nkiri, ihe nkiri na-ejide onwe ya, ihe nkiri mgbasa ozi, na-ese ihe nkiri, ihe nkiri ụgbọ ala, ihe nkiri vidio, ihe nkiri ihe nkiri ihe nkiri, ihe nkiri egwuregwu ụmụaka, ihe nkiri ahụike, akwa tebụl wdg. magburu onwe nhazi, High okpomọkụ kwụsie ike, ala efere si Njirimara, ala isi, magburu onwe printability.
Ruo ọtụtụ iri afọ, e kewara ngwaahịa ndị na-egosipụta PVC dị ka nke siri ike na nke na-agbanwe agbanwe, nke ejirila rụọ ọrụ dị iche iche. Dika mkparita uka di ugbua banyere nchedo gburugburu ebe obibi na nkwado ya, uzo ahia a n’odini ga-eche nsogbu di isi. Ngwaahịa nwere Tin, ihe ndị ọzọ na - enweghị ngwọta ga - adịwanye njọ. Na nke a, ọ dị mkpa ị paya ntị na iwu iwu dị iche iche, dị ka ụlọ ahịa ọgwụ, nnabata kọntaktị nri, ụkpụrụ ikuku ujọ nke ime ụlọ ma ọ bụ ụkpụrụ egwuregwu ụmụaka. N'oge gara aga, tin, ndu na barium bụ ihe eji arụ ọrụ n'ọtụtụ ngwa, mana ya na European Union na-eji naanị zinc calcium na barium zinc, mpaghara ndị ọzọ dị n'ụwa ji nwayọ na-eso mmepe a ma na-ahọrọ nhọrọ ndị a.
Otu mkpọ okpomọkụ stabilizers maka plastic Ibé akwụkwọ isiike mpịakọta & wrapping film ịkwanyere ute
A na-ejikarị ihe nkiri PVC agbanwe agbanwe maka ngwaahịa ngwaahịa ọgwụ maka ezigbo mbadamba mbadamba, capsules, injections, sirinji na ọtụtụ ngwa ọgwụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, eji maka ihe eji egwuri egwu, akụrụngwa, ọdụ, ihe ịchọ mma, ngwa ọrụ, ihe nri, ịchọ mma, ihe eji ewu ụlọ na ụlọ ọrụ dị iche iche maka ebumnuche ebumnuche. Ihe nkiri ndị a na-esite na Ca / Zn PVC Stabilizers dịka ọ na-adịte aka, ike dị elu, nkwupụta mmiri, nkwụsi ike, enweghị ọla na-emerụ ahụ, enweghị phenol, enweghị onwe. Ọzọkwa, ngwugwu na-agbanwe agbanwe na-eduga usoro nkwakọ ngwaahịa n'ihi na ọ bụghị naanị na-enye nchedo ngwaahịa ahụ kamakwa ọ na-enye ndị na-azụ ahịa ihe dị mma yana na-emetụta gburugburu.
PVC Calcium Zinc stabilizer maka extrusion plastic PVC profaịlụ windo ọnụ ụzọ ụlọ
PVC stabilizer / okpomọkụ stabilizer bụ otu n'ime ihe ngwọta kachasị mma maka windo PVC oge a ma rụọ ọrụ, ọnụ ụzọ, ọnụ ụzọ teres, ọnụ ụzọ na-apụ apụ, windo ụlọ ahịa, ogige mbata na mgbidi nkewa dabere na sistemu profaịlụ. Agba mbụ na nguzogide ihu igwe nke profaịlụ windo na-acha ọcha bụ isi ihe achọrọ maka profaịlụ, na njedebe a, anyị mepụtara otu mkpọ na-eme ka ọmarịcha ihe dị iche iche ma dị ike, ma nwee mkpa maka nguzogide UV. E jiri ya tụnyere usoro Pb ọdịnala, ndị na-eme ka CaZn nwee njigide dị mma ma ọ bụ ka mma, mmetụta dị ike ma ọ bụ nkwụsi ike akụkụ, ọbụlagodi mgbe ekpughere ha na mgbanwe mgbanwe okpomọkụ, ma ọ bụ na mmiri na ihu igwe akọrọ na radieshon nke anyanwụ na-eme ka profaịlụ windo PVC kwụsie ike n'ụzọ dị otú a. n'ibu Njirimara.
Stkwanyere stabilizer maka Waterproof tile Roofing tile Plastic roofing PVC corrugated Sheet PVC resin Plastic Sheet
Calcium Zinc Stabilizers / okpomọkụ stabilizer awade na-abụghị egbu egbu PVC ụlọ ụlọ usoro hụrụ oke uto na-adịbeghị anya n'ihi na a dịgasị iche iche nke standout e ji mara, karịchaa, Ekliziastis, anwụ ngwa ngwa na ọjọọ ihu igwe na ọnọdụ okpomọkụ ókè, obere ndụ okirikiri na-akwụ ụgwọ, ike arụmọrụ, okpomọkụ na ntụgharị anyanwụ, nguzogide ire ọkụ, nguzogide kemịkal na griiz n’etiti uru ndị ọzọ. Ọzọkwa, ndị na-edozi PVC na-enye arụmọrụ ike, kwesịrị ekwesị maka mmepụta mpempe akwụkwọ, ezigbo nkwụsi ike nke ọkụ, ogologo nkwụsi ike ọkụ.
Elu dị elu PVC ndị na-arụ ọrụ maka mgbidi okporo ígwè PVC shutters Ogige fencing Picket nsu ịnyịnya nsu
Oghere fencing PVC mara mma nke ukwuu ma họrọ ọrụ maka paddock ọ bụla, ụlọ anụ ma ọ bụ nke na-agba ịnyịnya. Oghere okporo ígwè Vinyl, nke a na-akpọkarị dị ka ngere okporo ígwè, bụ ezigbo ngere ngere maka ụdị ọrụ ọ bụla. E jiri ya tụnyere usoro Pb ọdịnala. Aimsea na-enye ọtụtụ ndị na-eme ka mmadụ kwụsị maka ụdị fencing niile. Ndị na-edozi Aimsea CaZn nwere njigide agba ka mma, mmetụta dị ike ma ọ bụ nkwụsi ike akụkụ nke imepụta ngere PVC. Ọbụna mgbe ekpughere na mgbanwe mgbanwe okpomọkụ siri ike, ma ọ bụ na mmiri ma ọ bụ ihu igwe akọrọ na radieshon nke anyanwụ na-eme ka mgbidi PVC kwụsie ike n'ụzọ dị otú a nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ ha.
Ihe nchekwa PVC kacha mma maka mkpuchi ihe mkpuchi Akara windo etiti profaịlụ ụzọ ụzọ akụkụ co-extrusion agba
Vinyl na-agbanwe agbanwe bụ insulator siri ike nke siri ike mgbe ejiri ya dị ka nkewa ma ọ bụ ọnụ ụzọ. O nwere ike ibute ikuku ọkụ dị elu na ụlọ gị, ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ ebe obibi. Dị mfe iji na ịwụnye, nkewa vinyl ga-akwụsị mgbanwe nke okpomọkụ, si otú a na-echekwa ego ma na-abawanye nkasi obi nke ndị ọrụ. Calcium Zinc anyị na-edozi ga-anabata ihe mkpuchi ọkụ a niile nke na-adịghị egbu egbu na gburugburu ebe obibi. The stabilizer nwere ezi ihu igwe kwụsie ike, magburu onwe mbụ agba, mbadamba ala, obosara nhazi nso.
Pvc nwekwara, Vkwanyere Okpomọkụ stabilizer, Ịkwanyere stabilizer, Vkwanyere Non-egbu egbu stabilizer, Vkwanyere Okpomọkụ stabilizer N'ihi Flexbile, Vkwanyere One Pack stabilizer,